I-Moosend: Ukumaketha nge-imeyili nokuzenzakalela | Martech Zone
NgeSonto, ngoFebhuwari 17, 2019 NgoMsombuluko, Februwari 18, 2019 UGeorge Fakorellis
I-Moosend, abaklonyelisiwe Ukumaketha nge-imeyili kanye nesikhulumi se-Automation, ichaze kabusha izici zokumaketha ze-imeyili, izinhlelo zamanani entengo, kanye nenani lemali ngokungaguquguquki kwayo, ukuzinikela ekwenzeni okuhle, nokusebenza kokusekelwa kwamakhasimende.
Kungakapheli iminyaka engu-8 nje, I-Moosend ukwazile ukusungula ubukhona bomhlaba wonke ngama-ejensi aphezulu nezinkampani zamazwe amaningi njenge I-Ted-X, Futhi ING, ukubala nje abambalwa.
I-Moosend bekuyipulatifomu yokuqala embonini ukuba Kuqinisekiswe i-ISO ne-GDPR, ngaleyo ndlela kufakazelwa ukuthi imikhuba yayo yenzelwe ukuqondiswa komsebenzisi engqondweni.
Okuqale njenge-imeyili, kunikeze indawo yayo Ukumaketha Nge-imeyili Nokuzenzakalela, futhi manje i-AI.
Ngenkathi kuthunyelwa i-imeyili yokuqala ngo-1971, kwenziwa umlando. Manje, ngo-2019, i-imeyili isishintshe yaba enamandla marketing isu kuqashwe ochwepheshe bezokumaketha nabasebenzisi bansuku zonke ngokufanayo, abavumayo I-400% ROI.
Lokho kungenxa yokuthi Ubuchwepheshe Bokumaketha i-imeyili buvele ngokumangalisayo, ukuhlinzeka Abathengisi ngezixazululo ezinhle kakhulu kunqwaba yezinkinga.
Ngokuyisisekelo, Amapulatifomu Wokumaketha nge-imeyili ziguquke zaze zafika ezingeni lokuthi aziwona nje amathuluzi ezincwadi kodwa, kunalokho, indlela yokuxhumana phakathi kwabakhangisi nezithameli zabo.
I-Moosend kuyinto engabizi isoftware yokuthengisa ye-imeyili engakwazi ukumboza izidingo eziningi zomthengisi futhi ilungele izinkampani ezinkulu ezinezimfuno eziningi noma ezincane ezinesabelomali esiqinile.
Phakathi neminyaka, I-Moosend ihlangabezane nokukhula okukhulu ngenxa yemodeli yabo egxile kuzwela kanye nensizakalo esekelayo yokuxhasa edale ukwethembana phakathi kwabo namakhasimende abo.
Bakwazile ukuthola amaphuzu aqinile nabuthakathaka omkhiqizo wabo nezimakethe futhi benza ukulungisa okulungile ukuze banikeze isisombululo esiphelele.
Lokhu kungaqinisekiswa ngokushesha kumawebhusayithi anikezelwe wokubuyekezwa kwesoftware, njenge I-Capterra futhi Isihlanganisi se-G2, lapho IMoosend ibalwa phakathi kweSoftwares ephezulu yezokukhangisa emhlabeni jikelele.
Izixazululo zeMoosend Zokumaketha Nge-imeyili
Isoftware kaMoses yokuthengisa nge-imeyili isuselwe emafini futhi ihlose ukuhlinzeka abathengisi ngokuxhumana okujulile nokuqhubekayo nezithameli zabo. Yisevisi ephelele ene- isikhombikubona esilula futhi enembile lokho kwenza ukuzulazula ngethuluzi kube lula futhi kube ngokwemvelo.
Kodwa-ke okwenza ukuthi iMoosend ivelele, ivolumu nokuhlukahluka kwezici ezishintshayo kanye nezinhlelo zamanani okuncintisana nokuguquguqukayo.
Kumele kushiwo ukuthi kukhona ngokuphelele uhlelo lwamahhala laphakade lwababhalisile abangafika kwabangu-1000, okuyinto eyamukelwa kakhulu.
Vele, uMoosend uyakuqonda ukuthi kubaluleke kangakanani ukuthi umthengisi akwazi ukukala imizamo yakhe. Kungakho ipulatifomu inikezela ngesici sokuhlola sokuhlukaniswa kwe-A / B futhi kungokwaso Ama-Analytics imibiko lokho kunganikeza abasebenzisi imininingwane ewusizo nemininingwane yemikhankaso yabo.
A okusebenziseka kalula, ukuhudula bese uphonsa umhleli kufakiwe nokuhlanganiswa okukhulu kakhulu njengoba ungadala i-newsletter yakho ngemizuzu ngaphandle kokuthi ulwe nesoftware yokuhlela yangaphandle engaba yinkimbinkimbi kakhulu. Izifanekiso ezifakiwe zingukuthinta okuhle futhi.
Ekugcineni, I-Moosend ingahlanganiswa ngamapulatifomu adumile afana neMagento, WooCommerce, neZapier, into engeza ukuguquguquka okungaphezulu kwesikhulumi.
Izindlela ezihamba phambili zokuMaketha kwe-imeyili
Iningi lezinkampani ezisebenzisayo imeyili Marketing ngoba okungenani ingxenye yemizamo yabo yokumaketha izothola ukuthi inenzuzo enkulu kunabancintisana nabo.
Kodwa-ke, akusho ukuthi ukumaketha nge-imeyili kulula.
Kufakazelwe ukuthi kunezindlela ezahlukahlukene ezisebenza kangcono futhi okufanele zisetshenziswe yibo bonke abathengisi abafuna ukufeza okuhle kakhulu enkampanini yakhe.
Ukuhlukaniswa kohlu yikho okwenza ukumaketha kwe-imeyili kube yimpumelelo. Abathengi namuhla abafuni ukuvele bahlaselwe ngemilayezo yezentengiso engasebenzi. Akuwona wonke umuntu ofuna ukuzwa ngayo yonke into futhi indlela engcono yokukufeza lokho ngohlu lwababhalisile ngukubahlukanisa ezinhlwini ezahlukahlukene.
Usebenzisa Ukumakethwa Kwe-imeyili Ukukhulisa Umholi. Lokhu kusetshenziswa kwe-imeyili Marketing sekuqhubeke iminyaka. Inhloso yalowo mkhuba akukhona ukuguqula ukuhola ngokushesha kepha ukumfundisa nokumguqula ngokuhamba kwesikhathi ngokuzayo.
Ukusetshenziswa kwe Marketing Automation ingayandisa imiphumela emihle yenkampani ngaphandle kokutshala imali esikhathini esingeziwe noma kwabasebenzi. Lo mkhuba ungasetshenziselwa ama-imeyili okumele kubangela ngokuzenzakalela ngemuva kwemicimbi ethile efana ukulahlwa kwenqola or wamukelekile ama-imeyili.
UMoosend ukhonza izinkulungwane zezinkampani emhlabeni jikelele ezimbonini ezahlukahlukene njenge-imeyili Marketing kuyindlela ebalulekile yokuxhumana kwezokumaketha engasetshenziswa yilo lonke ibhizinisi elikhona.
I-Moosend iyikho konke abathembisa ukuthi bazoba yikho, nokuningi! Ukuxhumana kuhle kakhulu, futhi umphathi wethu we-akhawunti kaMoosend nethimba lokusekela lobuchwepheshe badlulele ngaphesheya nokusisiza ukufeza izinhloso zethu, ngaso sonke isikhathi lapho besizidinga khona. Umkhiqizo futhi unembile futhi kulula ukuyisebenzisa. Angikwazi ukuncoma iMoosend ngokwanele kunoma yiliphi ibhizinisi elifuna i-ESP entsha.
U-Anthony Rigby ovela kuCareerBuilder
Esikhathini sedijithali imikhiqizo yesoftware ziyachuma njengoba ziya zidingeka kakhulu ezinkampanini. Ukwehlukanisa nabancintisana nabo, amabhizinisi manje kufanele anikeze amakhasimende awo okungaphezu komkhiqizo omuhle. Izinkampani eziphumelele kakhulu lapho zithembele ekulethweni kwenani, ulwazi, nobuchwepheshe kumakhasimende abo.
Abathengi balandele indlela yemvelo yentuthuko futhi abasathembi amagama acacile. Esikhundleni salokho, bafuna amanani asuka kukhwalithi nentengo yomkhiqizo (hhayi ukuthi lezi zinto azisenandaba).
I-Moosend uyakwazi lokho futhi yingakho begxile kakhulu ekunikeleni emphakathini wabo nge ukwesekwa kwamakhasimende okutholakala njalo, wabo umtapo wolwazi obanzi esihlokweni sokumaketha kanye namathuluzi abo awusizo nokho amahhala njenge- Isihloli Somugqa Wesihloko Samahhala.
Tags: ukuzenzekelayo kokuzenzekelayo
UGeorge uyi- Umlingani Wokumaketha Okukhulayo usebenzela imeyili ezishintshayo software Moosend! Uyakuthanda ukubhala ngokuMaketha ku-Digital Era nangama-hacks okukhula akutholayo ekuhloleni kwakhe kwansuku zonke. Uhlala njalo enesifiso sokukhuluma ngokuhlangenwe nakho nemibono ngakho-ke zizwe ukhululekile ukumshiya umlayezo ozokwabelana ngolwazi lwakho oluthakazelisayo.